Iflethi ehonjiswe kakuhle kumbindi wedolophu yaseOulu, indawo yokupaka yasimahla - I-Airbnb
Iflethi ehonjiswe kakuhle kumbindi wedolophu yaseOulu, indawo yokupaka yasimahla
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLeila
Kanye embindini weOulu, igumbi elitofotofo elikumgangatho we-7 ukuze usebenze okanye ukhenkethe. Indlu ebanzi, ejonge eOtto Karh Park. Uhambo olufutshane ukuya kuzo zonke izinto eziluncedo edolophini. Iibhedi ezintandathu zizonke, zokupaka egaraji. Wamkelekile!
Kanye embindini we-Oulu, iflethi e-Coyy kumgangatho we-7. Ukuhamba umgama kuzo zonke iindawo zokutyela kunye neenkonzo edolophini, imbonakalo yepaki ebukekayo. Iibhedi zabantu ukuya kuthi ga kwisithandathu, indawo yokupaka kwigaraji eshushu yesakhiwo. Wamkelekile!
1 iisofa eziyi-, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.89 · Izimvo eziyi-206
Indawo yokuthenga yeValkea, iMakia park café kunye nezinye iinkonzo ezisembindini wedolophu zilapha kanye ecaleni kwendlu, umgama wemizuzu emi-2. Iziko lokuthenga iValkea, ipark cafe iMakia kunye nazo zonke iinkonzo zedolophu yaseOulu zikufuphi neflethi, yimizuzu emi-2 kuphela ukuhamba.
Sifumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ngefowuni kunye ne-imeyile. Ungasifumana ngexesha lokuhlala kwakho ngefowuni okanye nge-imeyile.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$527